NISA oo lagu eedeeyay afduubka Ikraan Tahliil Faarax | KEYDMEDIA ONLINE
NISA oo lagu eedeeyay afduubka Ikraan Tahliil Faarax
Hooyo Soomaaliyeed oo ku dhaqan dalka Turkiga ayaa Ha’yadda Nabad-sugidda iyo Sirdoonka Qaranka ku eedeeysay in ay dileen ama afduuduubeen gabar ay dhashay.
ANKARA, Turki – Hoooyo Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Qaali Maxamuud Guhaad, oo warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay in ay la’adhay gabar ay dhashay oo lagu magacaabo Ikraan Tahliil Faarax, muddo 16 maalmood ah, waxayna sheegtay in ay afduubteen rag ka tirsan NISA.
Sida ay xustay Qaali Maxamed, inta u dhaxeysa KM-0 iyo Hotel Globel, ayaa laga afduubtay Ikraan, waxaana loo qaatay dhanka guriga Maamo Khadiijo, oo ay degan yihiin taliska Nabad-sugidda.
Ikraan Tahliil, ayaa ka tirsan shaqaalaha Gobolka Banaadir, waxayna aqoon kororsi u aadday dalka Ingiriiska, kadib geeridii Allaha u naxariistee, Duqii hore ee Muqdisho Injineer Yariisow, waxayna dhawaan dib ugu soo laabatay dalka.
Dhamaan Madaxda Dowladda Fedaraalka, garsoora dalka, booliska iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ayay ka codsatay in si daacad ah loola baadi goobo gabdheeda oo ay si aan ka gambad lahayn ugu tuhmeyso NISA.
Waxaa soo badanaya marba marka danbeysa dadka aan dib danbe loo arkin marka ay galaan xarunta NISA, tan iyo markii Hay’adda Nabad-sugidda loo dhiibay Fahad Yaasiin.